Women’s participation in decision making in Myanmar is unacceptably low. There areawide range of reasons why women are currently so underrepresented in local, state/regional, and national decision making processes. These range from access to education and resources to deeply engrained social and cultural barriers relating to the role of women in society. Many positive measures are already underway to help address the barriers to women’s participation, but much still needs to be done. Myanmar’s current democratic transition and new civilian government presentsaunique opportunity to advance gender equality and women’s participation in political and decision making processes. This is an opportunity that must be capitalized on as the benefits and rationale of involving women are clear:
Ethnic women and men supporting the We Stand Together campaign.
Women make up over half the country’s population (51.8%). If they are marginalized from full and equal participation in political and decision making processes, Myanmar cannot be considered fully democratic.
Involving women helps ensure that the needs and interests of women and girls are taken into account in laws, policies, and programs.
Societies that are more inclusive of women, especially women with disabilities and women of marginalized groups, are often less violent and more tolerant. This has positive impact on everyone.
Involving women makes economic sense. Significant research shows that gender equality leads to more prosperous societies and better performing businesses.
This must change. The We Stand Together campaign will work to help address this by mobilizing support for increased women’s leadership and representation in politics and other decision making bodies, advocating with key decision makers on changes to facilitate this, and increasing awareness about the importance of having an active role for women in decision making at all levels of society.
The We Stand Together campaign is part of Yaung Chi Thit’s overall program to promote women’s participation. The program nurtures women leaders by building their capacity, as well as by advocating with the national and state/regional governments to advance women’s equality. She Leads addresses the lack of women’s participation and leadership in political and decision making process at all levels. It is built on the strength of its alumnae network and focuses on building bridges between women and different stakeholders. During the two-year program period, over 1,000 She Leads alumnae from across the country were trained. She Leads also hadasignificant community impact, with alumnae educating over 100,000 voters in 2015 elections, over 70 alumnae took on leadership roles in the elections, and numerous others in civil society organizations, educational institutes and as lawyers.
The We Stand Together campaign will mobilize support, advocate with key decision makers, and link existing campaigns from other networks to increase the number of women leaders at all levels of decision making.
Find out more about the We Stand Together campaign at: www.yaungchithit.org #westandtogethermm
Community mobilization awareness raising events
Letter writing to key decision makers
Advocacy meetings at national level (YCT), regional and local levels (She Leads alumnae) with key decision makers Media and social media campaign
Women’s Leadership in Myanmar:
51.8% of the population are women
12.8% of current elected MPs are women
Myanmar is ranked 159 out of 193 countries by the Inter-
Parliamentary Union for the number of women MPs in national
parliament, the second lowest in Southeast Asia
Only 1 woman Union Minister out of 22 at the national
၂၀၁၉ခုနှစ် ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲအား အများပြည်သူပိုမိုသိရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ ERCB (Election Reform Coordination Body) အဖွဲ့မှ မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးကမ်ပိန်းအား မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)- မရမ်းကုန်းနှင့် လှိုင် မြို့ နယ်တို့တွင် မတ်လ ၁၈ရက်နေ့နှင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)- လှိုင်သာယာနှင့် အင်းစိန် မြို့ နယ်တို့တွင် မတ်လ၂၁ရက်မှ ၂၂ရက်နေ့ အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့မှလည်း အသိပညာပေးသည့် အစီအစဉ်၊ လက်ကမ်းစာစောင်များဝေမျှခြင်း၊ ကားဖြင့်လှည့်လည်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ERCB အဖွဲ့ဝင်များ – Horn Bill, MYAFREL, MILI, Phan Tee Eain, PJM, Yaung Chi Thit
၂၀၁၉ ရန်ကုန်စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ERCBအဖွဲ့မှ မတ်လ ၁၈ ရက်၊ ၂၁ နှင့် ၂၂ ရက်နေ့တို့တွင် လှိုင်မြို့နယ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တို့တွင် မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေး ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့ရာ ERCB အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သောMILI ဖန်တီးအိမ်၊ ရောင်ခြည်သစ်၊ Horn Bill၊ MYNFREL၊ PJMတို့ ပါဝင်လျက် မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေးစာစောင်များဖြန့်ဝေခြင်း၊ ရန်ကုန်စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သော မဲဆန္ဒရှင်များသိစေရန်အကြောင်းအရာများ ရှင်းလင်းပြောပြခြင်း စသည်တို့ကိုအင်တိုက်အားတိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
She Leads အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး မတင့်တင့်ဝင်းက ၂၉၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၈ တွင် She Leads အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းမှ ရရှိခဲ့သော သင်ခန်းစာများကို တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းအော်ကျေးရွာတွင် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းနှင့် တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူ ဒေသခံ ၂၅ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့က ဦးစီးလုပ်ဆောင်သည့် တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုများ ပိုမိုများပြားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ဆောင်သွားမည့် ကမ်ပိန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အဆင့်တိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာပါဝင်ရန် စည်းရုံးပြောဆိုခြင်းများ၊ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ ပိုမိုများပြားလာစေခြင်းကို လူထုထောက်ခံမှုရရှိအောင် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများ၏ ပံ့ပိုးမှုများ ရရှိလာစေရန် အဓိကထား ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
She leads အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး မစန္ဒာရှိန် က အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းမှ ရရှိခဲ့သော သင်ခန်းစာများကို ၂၈၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ စတိန်ကျေးရွာ၊ ဘုတ်ပြင်းပြင်းမြို့နယ် တွင် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းနှင့် တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူ ဒေသခံ ၂၇ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့က ဦးစီးလုပ်ဆောင်သည့် တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုများ ပိုမိုများပြားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ဆောင်သွားမည့် ကမ်ပိန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အဆင့်တိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာပါဝင်ရန် စည်းရုံးပြောဆိုခြင်းများ၊ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ ပိုမိုများပြားလာစေခြင်းကို လူထုထောက်ခံမှုရရှိအောင် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများ၏ ပံ့ပိုးမှုများ ရရှိလာစေရန် အဓိကထား ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
She Leads အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး မမြနှင်းရည်က ၂၆၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၈ တွင် She Leads အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းမှ ရရှိခဲ့သော သင်ခန်းစာများကို တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ် တွင် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းနှင့် တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူ ဒေသခံ ၂၄ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ရောင်ခြည်သစ်အဖွဲ့က ဦးစီးလုပ်ဆောင်သည့် တွဲလက်ညီညီကမ်ပိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုများ ပိုမိုများပြားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ဆောင်သွားမည့် ကမ်ပိန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အဆင့်တိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာပါဝင်ရန် စည်းရုံးပြောဆိုခြင်းများ၊ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ ပိုမိုများပြားလာစေခြင်းကို လူထုထောက်ခံမှုရရှိအောင် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများ၏ ပံ့ပိုးမှုများ ရရှိလာစေရန် အဓိကထား ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။